फिफा वरियतामा केही फेरबदल, बेल्जियम शीर्ष स्थानमा ! नेपाल कति नम्बरमा ? |
फिफा वरियतामा केही फेरबदल, बेल्जियम शीर्ष स्थानमा ! नेपाल कति नम्बरमा ?
२०७७, १ आश्विन बिहीबार २०:०० September 17, 2020 ताजा खबरखेलकुद
काठमाडौं । विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाले जारी गरेको नयाँ वरियताक्रममा केहि फेरबदल भएको छ । बिहीबार जारी गरेको सेप्टेम्बर महिनाको वरियतामा केही राष्ट्रको स्थान परिवर्तन भएको हो । कोरोना भाइरस महामारीका कारण लामो समय कुनै फेरबदल नभएको फिफाको वरियता सूचीमा यसपटक केही राष्ट्रको स्थान परिवर्तन भएको छ ।
वरियताको शीर्ष स्थानमा यसअघिकै टोली बेल्जियम यथावत रहेको छ । वरियताको टप–४ मा यसपटक पनि कुनै फेरबदल भएको छैन । तर, नयाँ वरियताअनुसार नेसन्स लिगमा आफ्ना दुवै खेलमा सहज जित निकालेको पोर्चुगलले आफ्नो स्थितिमा दुई स्थान सुधार गर्दै टप–५ मा उक्लिएको छ ।पोर्चुगल यसअघि सातौं स्थानमा थियो ।
त्यस्तै, उरुग्वे एक स्थान घटेर छैटौँ स्थानमा झर्दा एक स्थान प्रगति गर्दै स्पेन सातौं स्थानमा उक्लेको छ । त्यस्तै, सन् २०१८ को विश्वकपको उपविजेता क्रोएसिया भने दुई स्थान घटुवा भएर आठौ स्थानमा झर्दा नवौं र दशौं स्थानमा रहेको अर्जेन्टिना र कोलम्बिया भने पुरानै स्थानमा स्थिर रहेका छन् । यसपटक स्वीट्जरल्यान्ड तीन स्थान घटुवा भएर १५औं स्थानमा पुगेको छ । ११औं स्थानमा मेक्सिको, १२औं स्थानमा इटाली, १३औं स्थानमा नेदरल्यान्ड्स, १४औं स्थानमा जर्मनी रहेका छन् । त्यसैगरी, डेनमार्क १६औं, चिली १७औं, स्वीडेन १८औं, पोल्यान्ड १९औं र सेनेगल २०औं स्थानमा सेनेगल रहेका छन् ।
यता, दक्षिण एसियाबाट भारत शीर्ष स्थानमा छ । गत वरियतामा भन्दा एक स्थान खस्केको भारत वरियताको १०९औं स्थानमा छ । त्यस्तै, १४९औं स्थानको अफगानिस्तान दोस्रोमा रहँदा १५५औं स्थानको माल्दिभ्स तेस्रोमा छ । १७०औं स्थानमा स्थिर रहेको नेपाल दक्षिण एसियाको चौथो स्थानमा छ । नेपाल यसअघिकै वरियतामा यथावत रहेको हो । त्यस्तै, १८७औं स्थानमा बंगलादेश, १८९औं स्थानमा भूटान, २ सयौं स्थानमा पाकिस्तान र २०६औं स्थानमा रहेको श्रीलंकाको पनि वरियतामा कुनै फेरबदल भएको छैन ।
२०७७, २ कार्तिक आईतवार १९:५२
फुटबल खेल्न नेपाल आएका विदेशी खेलाडीलाई जनही १२ हजार आर्थिक सहयोग
२०७७, ३१ भाद्र बुधबार १६:३९
रोनाल्डोलाई उछिन्दै किङ मेसी बने सर्वाधिक कमाउने फुटबलर
२०७७, २४ भाद्र बुधबार ०९:४९
चर्चित फुटबलर रोनाल्डोले अब चढ्नेछन विश्वकै महंगो कार